Imbonakalo yoLwandle oluNxweme oluseFlethini iWhipsiderry Porth Newquay - I-Airbnb
Imbonakalo yoLwandle oluNxweme oluseFlethini iWhipsiderry Porth Newquay
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCharlie
INkundla e-1 yaseNxwemeni ikumgangatho ophantsi, indawo yokuhlala ekoneni, enembono emangalisayo, engaphazamisekiyo phezu kweNewquay Bay kunye noNxweme lweAtlantiki.
Ipropathi ilula kakhulu imini yonke, kwaye inomoya, inezixhobo zangoku, kodwa zikhululekile kwaye zisekhaya. Iza kuhlalisa abantu abadala aba-4 ngokukhululekileyo.
Esi sakhiwo sikumawa angasemva kolwandle lwaseWhipsiderry olufihlakeleyo, kunye nePorth kunye nolwandle, iindawo zokutyela kunye ne-pub umgama nje wemizuzu emibini yokuhamba, kunye ne-Watergate Bay emangalisayo imayile ecaleni kwendlela okanye indlela.
Akukho ukubaleka kuyo, imbono kunye nendawo yeNkundla yoNxweme yeyesibini. Iilwandle ezingonakaliswanga kunye neendawo eziluhlaza ecaleni kwamawa ziziva ihlabathi likude nedolophu yaseNewquay, kodwa kukumgama omfutshane nje we-10 min xa uqhuba, nazo zonke izinto eziluncedo umntu anokuzifuna.
Le ndlu inamagumbi okulala amabini, enye inebhedi yeSuperking size, enye inamagumbi angatshatanga. Kukho indawo enye eyabelweyo yokupaka kule propati, kunye neyokupaka simahla iimoto ezongezelelweyo ngaphambili kwesiza.
Iflethi elungele inja isekwe kwindawo evulekileyo yokuhlala evulekileyo, enekhitshi elixhotyiswe kakuhle, itafile yokutyela yabane, kunye nesofa enkulu ekoneni apho ungathatha khona ukutshona kwelanga okuzukileyo ngexesha lokuhlala kwakho ...
Le yinxalenye ekhethekileyo yeCornish Coast. Inyani yokuba iilwandle kunye nendlela yaselunxwemeni ililitye eliphoswa kude nomnyango, ngelixa kuphela i-10 mins uqhuba ukusuka kwiSikhululo sikaloliwe saseNewquay, kwisikhululo seenqwelomoya kunye ne-A30, yenza kube lula ukufikelela, kukuvumela ukuba uqhubeke ngqo ngokuphumla kwindawo yakho yokuhlala.
Ndisebenza ngokufanelekileyo ekuhlaleni- Ndicela ukuba indawo iphume nge-1000hrs, kunye nefestile ye-1500hrs- 0000hrs kwabo bafikayo.
Isitshixo siya kuba kwibhokisi yokutshixa ekhuselekileyo ngasemnyango wangaphambili.
Ukubhukisha kuya kwenziwa ngeveki, ngoMgqibelo ukuya ngoMgqibelo.
Ukuba kukho nantoni na endinokuyenza ukunceda ndingaqhagamshelwa okanye ndifumaneke malunga neeshifti zam.
Isitshixo siya kuba kwibhokisi yokutshixa…